Aragtida dadweynaha Bosaaso iyo Qardho ,iyo doorashadii maanta (dhegayso) – Radio Daljir
Aragtida dadweynaha Bosaaso iyo Qardho ,iyo doorashadii maanta (dhegayso)
Janaayo 8, 2019 1:51 g 0
Dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Bosaaso iyo Qardho oo la soo xiriiray radio Daljir ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan doorashii maanta ee madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Deni iyo kuxigeenkisa Axmed karaash.
Shacabka aya soo dhaweeyay isbadalka ka dhacay Puntland ,waxayna ku baaqeen in madaxweynaha cusub uu oo fiyo balan qaadyadiisii uu sheegay xiligii uu musharax ahaa.
Dhegayso shacabka Qardho iyo dareenkooda .
Dhegayso Shacabka ku dhaqan magaalada Bosaaso iyo dareenkooda .
Daljir kala soco markasta aragtida dadweynaha oo fikirkaaga noo reeb.
Uncategorized 9732 Wararka 17312
Kheyre oo u hambaliyeeyay Madaxweynaha cusub ee Puntland
Axmed karaash waa madaxweyne kuxigeenka dowladda Puntland (dhegayso)